Ny olona rehetra avy amin'ny pachinko parlors, ny raharaham-barotra vaovao ny zava-nitranga sy ny andro, Mino aho fa misy ny olona efa nohariny tany amin'ny namany Sary. Satria tonga isan'andro na ino...
Ahoana ny mahita amin'ny fotoana mafana indrindra ny pachinko trano izy
Ary na Fiozao ara-potoana mafana ianao fa tena fotoana, dia mety ho re tsara. Matevina Fiozao ara-potoana, arakaraka ny toerana misy ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ny toerana sy ny miasa s...
Asa fandaniana ireo efi-trano matetika ny pachinko Sarotra ny fampihenana ny mpanjifa
■ Inona no manombokaaraka izay rehetra pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny fitantanana, sy ny fampihenana ny baolina mivoaka avy any amin'ny varotra, dia nahoana no mahasoa ny orinasa Miiba ny fan...
Endri-javatra - jereo amin'ny lalana mahazo any anelanelany toerana Horukon fotoana
Ao Horukon fisamborana, dia efa mba ho afaka hametraka ny baolina avy amin'ny Horukon. Anisan'izany, fametrahana avo, toerana kafa, dia ny iva-napetraka sy telo karazana ireo ankehitriny. Ao, eo afovo...
Endri-javatra - jereo ny alalan 'ny lalana mankany amin'ny onjan-ROM dia fiarovana vanim-potoana
Pachinko milina jackpot tapaka ao ROM fitantanana rehetra. Raha Minukere dingana mafy ny ROM, ny ambony ny mety izay givin ny jackpot. Noho izany, na misy lafiny tsara ny dingana ny ROM, ary avy eo am...
Endri-javatra - jereo ny alalan 'ny lalana mankany amin'ny onjan-ROM dia tezitra vanim-potoana
Ao amin'ny pachinko efi-trano, no mihevitra fa tezitra matetika sehatra tsara indrindra. Raha tsy izany, satria ho lasa tsy manana pachinko varotra ny trano izy. In, tahaka ny hafahafa famarana parlor...
Endri-javatra - jereo ny alalan 'ny lalana mankany amin'ny onjan-ROM matetika ny fiainana
Pachinko milina ny ROM dia, mafy vanim-potoana, matetika fotoana, dia nozaraina ho fe-potoana slump. Raha oharina amin'ny vanim-potoana iray sy tezitra mafy fotoana, dia mety Normal fiainana ny hilaza...
Fa feno mety teorian'ny ny pachinko
Ianao, ahoana no manamafy ny lehibe tao an-pachinko hira tao anatiny, dia heveriko fa ny ankamaroan'ny izay namely tsy mieritreritra be loatra. Pachinko milina, izay avy eo nametraka ao amin'ny efi-tr...
Fa ny olona izay te-mandanjalanja eo amin'ny ambim-bavany, fametrahana modely sy ny modely fanahafana ny pachinko trano izy
Ianao, aho, dia ho any amin'ny pachinko efi-trano, heveriko fa ny fisafidianana ny lalao modely mijery ny fivarotana manontolo voalohany. Noho izany, raha miezaka ny handresy izany, na tokony milalao ...
Fantaro ny nosy mafana indrindra niditra ny trano izy pachinko
Ao amin'ny pachinko parlors, pachinko milina dia vokatry. Ny fandaharana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ny ohatra, eo amin'ny lafiny indostria amin'ny hafa, dia ho tahaka izany koa...
Fantaro ny tena tsara toeram-pivarotana tao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko zava-nitranga
Inona no pachinko fivarotana na fahazoan-dalana manao ny hetsika, isika dia hijery na haka azy io izay no tapa-kevitra.■ famantarana iray volana hetsikaVoalohany indrindra, dia pachinko efi-trano, iza...
Faran'ny volana, tara ny pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny endri-javatra (na fe-potoana famerenana-misokatra amin'ny fiainana)
※ no fotsiny ny faran'nypachinko efi-trano Mba antsointsika hoe ny fironana ho an'ny orinasa iray manontolo, araka ny eritreritro dia ny olona sasany izay efa nandre ny tsaho izay tsy nivoaka. Raha ny...
※ koafaranypachinko efi-trano Mba antsointsika hoe ny fironana amin'ny orinasa iray manontolo satria orinasa ara-barotra dia tsy maintsy ho mahasoa isan'andro. Raha mihevitra toy izany, fa ny fandikan...
General misokatra-fiainana ny pachinko parlors, endri-javatra-mahita amin'ny alalan'ny-dalana
※ farany Mas?na ianao, antsointsika hoe ny fironana ny orinasa manontolopachinko dia natao tany amin'ny lalao ny mpanjifa iray sy toeram-pivarotana izay handresy na very. Na izany aza, raha very foana...
Handresy Ahoana no Hanemono-Dejihane (fototra hevitra)
Tantaran'ny pachinko, satria ny milina Fito dia lasa foto-kevitra, heveriko fa miditra ao na dia ireo izay tsy mahafantatra izany dia hoy izy tamin'i Hanemono. Ary ny sasany izay mahalala, Hanemono di...
Hanemono OK amin'ny sisin-taniny teorian'ny?
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, satria maro no navoakan'ny gazety pachinko, vaovao toy izany dia lasa mora ny hiditra ny tanana. Noho izany, raha toa ilay olona izay namely ny pachinko, indray mandeha...
Horukon ambany-napetraka endri-javatra, dia jereo ny alalan '-dalana tamin'ny fotoana
Ao amin'ny ordinatera, ary ny varotra napetraka, dia ny efitrano conserver f?fana dia afaka mifehy ny payout. Amin'ny maha-sehatra mba hamaritana ny isan-jaton'ny ny payout, avo-napetraka, toerana afo...
Horukon avo-endri-javatra-mahita ny alalan 'ny fomba fametrahana
Ao Horukon fisamborana, dia hoy izy tamin'i efa napetraka fisarahana. Pachinko tsena, raha ny varotra Uchikome kendrena ho Horukon, ary malalaka kajy ny fampihenana ny tahan'ny, ianao hoe mifehy ny pa...
Horukon sy ny vondrona fanahafana
Ao Horukon fisamborana, dia voalaza fa nizara ny jackpot amin'ny alalan'ny famaritana sokajin ny pachinko milina ao amin'ny mpanova. Noho izany, izany no ilazana fa mahomby amin'ny Horukon fisamborana...
Raha tsy fantatrao tsara, nisy efi-trano eto amin'ity pachinko Horukon hoe, dia toa ny olona sasany dia nihevitra ho tsy ara-dal?na, toy ny lavitra, tany am-boalohany dia tsy dia milina fa ny zavatra ...
Information nangonina mba hamoronana ny tambajotra ao amin'ny lisitry ny mpitsidika, Pachipuro in pachinko parlors
Heveriko fa misy mpanjifa izay mahita isaky ny handeha hisakafo any amin'ny pachinko trano izy. Mpanjifa izay mandeha isan'andro Shigeku tongotra noho ny mpiasa toy izany, antsoina hoe ny mpitsidika a...
Ny hoe ny anareo fa ny pachinko, Heveriko fa ny olona sasany, izay efa namaky ny teny tao amin'ny gazety pachinko. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, tsy ny gazety karama, free taratasy, sns miaraka amin...
Fanahafana ny vondrona, ho valin 'ny jackpot famantarana avy ao amin'ny Hall fanahafana ho an'ny vondrona tsirairay no ho izay novonoiny ny jackpot. Ny Strategy ny efitrano conserver f?fana, no efa ni...
Jereo ny alalan 'ny vondrona fanahafana an'i Horukon ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko
Ny teny pachinko ny vondrona fanahafana, matetika mety raha ny tokony ho teny mahazatra Raha toa ianao ao anatinareo mahafinaritra pachinko, tsy mahazo ny fanampiana saingy nilaza fa ny tarika dia tsy...
Jereo ny fanoloana dian'ny Xintai ny pachinko trano izy
Indray andro tao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko dia toy ny zava-nitranga lehibe Raha niresaka ny fanoloana Xintai, dia izay zavatra tonga teo amin'ny dian'ny momba ny indray mandeha a...
Jereo ny lafiny-fahazarana pachinko efi-trano [fantsika fanitsiana sy ny fantsika Apok ed.]
Rehefa nandeha matetika ny hilalao amin'ny pachinko efi-trano, Mino aho fa isika dia hahita ny tanjona voalohany dia ny modely tsirairay. Noho izany, dia ny fantsika fanitsiana izay tiako mba hamantar...
Jereo ny lafiny-fahazarana pachinko efi-trano [Horukon Set asan'ny fanahy]
Rehefa be dia be ny olona izay nandeha milalao ao amin'ny pachinko efi-trano, mihevitra aho fa ny mijery ny antontan-kevitra ao amin'ny angon-drakitra jiro. Raha tsy mijery ny antontan-kevitra, izay n...
Hit teo, dia miova eo amin'ny fanantenana sy ny tahotra, ary tsy nahavoa ihany koa, heveriko fa pachinko ny tena fahafinaretana. Na izany aza, raha ny hira dia, ny zavatra sasany izay mampita Chang, r...
Jereo ny mpanjifa fototra ny pachinko parlors
In pachinko parlors dia isan-karazany ny mpanjifa no tonga ny fivarotana. Tsy olona indraindray handeha hilalao, saingy mieritreritra aho fa tsy miraharaha anao loatra ny mpanjifa base, ao amin'ny pac...
Latabatra hisafidy amin'ny fotoana pachinko parlors hetsika
Pachinko efi-trano tamin 'ny fotoana ny hetsika toa manana bebe kokoa ny endriky ny olana ankapobeny, fa tsy misy toy izao. Latabatra foana na dia sitrana tamin 'ny fotoana ny zava-nitranga dia ankehi...
Mahatsara sy maharatsy azy, izay mikendry ny Xintai in pachinko parlors
Ao amin'ny pachinko efi-trano, sns teo anoloan'ny gara, ianao koa dia afaka milalao nampidirina navoaka avy hatrany taorian'ilay Xintai. Ao, ny tombony sy ny fatiantoka mikendry Xintai toy izany, isik...
Mail avy amin'ny efi-trano pachinko ilaina eo amin'ny latabatra hisafidy
In pachinko parlors, dia efa nandefa e-mail raharaham-barotra ny andro toy ny asa fandidiana. E-mail no tena ampahany, ny maraina sy ny sakafo atoandro miharihary eo anatrehanao, ary efa lasa maro pac...
Mail avy pachinko efi-trano tsy misy il?na azy eo amin'ny latabatra hisafidy
Ianao, amin'ny raharaham-barotra e-mail iray pachinko efi-trano, na dia ny afa-po ihany isaky ny, Mino aho fa mety ho maro no handray ny hafatra izay mahatsapa fa tsy tena ilaina. Ao amin'ny pachinko ...
Manadihady ny Fandresena mora mba hanahafana ny toe-javatra avy mametraka ny pachinko trano izy-kery
In pachinko parlors, mampiseho vokatra Toy izany koa orinasa hafa, izany hoe, misy soso-kevitra modely. Ahoana no dia fahazoan-dalana hidirana ny modely Tsy mitovy amin'ny tsirairay ny pachinko efi-tr...
Mandaitra pachinko nanangona vaovao amin'ny fampiasana ny angon-drakitra Robo toerana Seven
Misy pachinko toerana ny tahirin-kevitra Lobo toerana Fito. Toy izany koa ho toy P-WORLD ny orinasa toerana vaovao ianao, dia afaka mahita toy ny amin'ny fanambanin'ny modely vaovao sy pachinko efitra...
Mandaitra pachinko nanangona vaovao mampiasa ny P-WORLD
Tsara ny pachinko dia, mihevitra aho fa dia be dia be ny olona izay mampiasa ny t-izao tontolo izao. A maimaim-poana toerana, ka na iza na iza dia afaka jerena mora foana, dia mba hanangona ny vaovao ...
Mba hamaritana raha ny modely mba handresy avy amin'ny milina pachinko fandidiana sata
Ohatra ny lazan'ny amin'ny pachinko, dia tsy misy modely. Mazava ho azy, fa izay be dia be ny mpanjifa ny modely Popular ny sit. Noho izany, raha vao niditra ny fitarainana ny pachinko fivarotana, hev...
Na fametrahana pachinko modely ny efi-trano dia matetika Xintai, na matetika latabatra
Manerana ny firenena be dia be ny pachinko efi-trano, fa Xintai sy toeram-pivarotana fivarotana sy nampiasa latabatra eo afovoany no ivon'ny, misy isan-karazany ny pachinko parlors. Ny endri-javatra v...
Normal raharaham-barotra tamin'ny fotoana ny sehatra hisafidy dia pachinko trano izy
Jereo ny mba hahazoana antoka handao ny sehatra iray dia azo tantara fa, mba hisorohana ny simbasimba ny fampiasam-bola, tahirin-kevitra sy fantsika no toerana tianao ho hita. Ao, ao ny latabatra hisa...
Ny maha samy hafa ny raharaha politika noho ny toerana misy ny pachinko efi-trano (Station Agents & suburban fivarotana)
Ny tsena, mihevitra aho fa izay manao raharaham-barotra miaraka amin'ny fitaovana isan-karazany amin'ny toerana toe-piainana. Pachinko tsy afa, dia manana isan-karazany isan-karazany sy ny fepetra, ny...
Ny niandohan'ny ny volana - ny fanombohan'ny iray pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny endri-javatra (na fe-potoana famerenana-misokatra amin'ny fiainana)
※ Raha toa ka efa fotsiny zatra ny handeha ho fironana ho an'ny manontolo indostrian'ny hampifalypachinko efi-trano ao an-boky, nefa tsy mety ho nahatsikaritra, tao an-pachinko efi-trano, ary ny fotoa...
Ny zava-dehibe, rehefa voafehy ny tanjona latabatra hahita ny slump pachinko kisary ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny
Tantaran'ny pachinko efi-trano, lehibe lamba amin'ny milina antsoina hoe angon-drakitra Lobo, fivarotana izay napetraka lasa maro. Ny tsena aloha ny fanokafana sy ny mifanohitra teo aloha, sns, ao ami...
Pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny faritra endri-javatra (ny maha samy hafa ny raharaha politika amin'ny tan?n-dehibe sy ambanivohitra)
Koa satria dia pachinko efi-trano ihany koa ny orinasa ara-barotra, tsy marina ny fivarotana vao nahazo mpanjifa. Noho izany, orinasa hafa ihany koa, isika dia miasa amin'ny tsirairay mpivarotra varot...
Pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny payout zava-misy sy ny antony manosika ny weekday sy ny fialan-tsasatra
Ao amin'ny pachinko efi-trano, dia ho zaraina ho amin'ny fivarotana mba hampisehoana ny antony manosika ny toeram-pivarotana sy ny faran'ny herinandro mba hampisehoana ny antony manosika eo amin'ny an...
Pachinko efi-trano ny vola amin'ny fitaovana simbasimba Sarotra ny fampihenana ny mpanjifa
Pachinko modely misafidy ao amin'ny ady sy ny fomba specs
Ny pachinko milina, dia misy zavatra antsoina hoe spec. Spec sady toy ny numeric zava-dehibe izay maneho ny mety ho ny jackpot. Pachinko ny fepetra arahana, dia sokajiana ho karazany telo lehibe. Ao a...
Ary amin'ny andro voalohany fanoloana Xintai, ny tahirin-kevitra dia tsy misy ihany koa, satria ny fanjakana vaovao tsy misy, ny Neraiuchi hisafidy ny sehatra dia zavatra sarotra. Xintai ny andro voal...
Resaho ny momba ny ady pachinko tratra
Old pachinko dia, ny olona sasany fa tsara ny lalao na dia tsy mora be dia be ny fampiasam-bola. Tantaran'ny Pachinko dia, filokana dia tena mahery, dia vonona ny hanjavona amin'ny latsaky ny 30 minit...
Ny pachinko milina, dia foana tsoavaly ROM. Noho izany, inona no zavatra na ny ROM, tiako mba hojerentsika ny fomba fiasan'izy. Satria ROM dia, na mamaritra ny jackpot, izay misy ny fandaharana, toy n...
Tombontsoa sy ny fatiantoka amin'ny zorony mikendry isan-karazany ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, dia manana mihamaro ny pachinko parlors mba hametraka isan-karazany amin'ny zorony. Raha ny mahazatra, efa nanorina mifanolotra vondrona vitsivitsy ny modely mitovy, ao...
Tombontsoa sy ny fatiantoka mba hifidy ny fahafahana avo utilisation pachinko trano izy
Ny olon-drehetra dia, ny boky mba hifidy ny pachinko fivarotana, rivotra iainana sy ny fanompoana ny payout sy ny toeram-pivarotana, sns, ataoko fa isan-karazany teo, afa-tsy ny fandidiana sata raha t...
Tombontsoa sy ny fatiantoka mikendry ny takelaka modely ny pachinko trano izy
Signboard modely, Te-hilalao mpanjifa indrindra ao amin'ny pachinko efi-trano, 's ny vokatra nasongadina. Signboard modely, fa samy hafa ny tsirairay tsena, matetika isika dia maro modely iray malaza ...
Tombontsoa sy ny fatiantoka mikendry ny tsy ampy taona modely amin'ny pachinko parlors
Na pachinko efi-trano izay mandeha ny aminareo, dia heveriko fa misy foana ny tsy tsara loatra ny fiasan'ny modely kely. Indrindra indrindra, na efa napetraka manoloana ny fivarotana ao aoriana, ny is...
Tombontsoa sy ny fatiantoka ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ny fiovam-po tahan'ny
Rehefa mandeha any amin'ny pachinko sy ny slot, Heveriko aloha fa ny fiovam-po isaky ny manahy. Common amin'ny pachinko efi-trano, ny habetsahan'ny ny baolina, rehefa hampisambotra ny mpanjifa, iray a...
Tombontsoa sy ny fatiantoka ny hetsika mikendry modely ny pachinko trano izy
Ao amin'ny hetsika latabatra, dia marina fa na dia nieritreritra pachinko parlors mety manaiky noho ny mahazatra. Na izany aza, dia midika izany fa ny sehatra iray manontolo ho toy izany fanitsiana di...
Tombontsoa sy ny fatiantoka ny mifidy ambany ny tahan'ny fampiasana pachinko trano izy
Ny fotoana dia namoha ny varavaran'ny trano-pachinko efi-trano, feno latabatra foana, ianao no rattle-panjakana, ary izany foana shop'll fijanonana, Mino aho fa misy olona maro izay tsy mahatsapa ny h...
Volana tapaky ny tapaky ny volana pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny endri-javatra (na fe-potoana famerenana-misokatra amin'ny fiainana)
※ mba haharitra toy ny fironana ho an'ny orinasa iray manontolo ireo izaypachinko Favorite Please manondro hoe, mety ho fantatrareo koa ny olona, ??mba hifaninana tao amin'ny efitrano fandraisam-bahin...